Kuongorora Sailor kumahombekombe | Zvazvino Zvinyorwa
Mubhuku rino Alberti inounza kuburikidza nemavhesi ake kushungurudzika kwekuve kure kwake Santa Maria Port. Munzvimbo yake nyowani nyanduri haasi padyo negungwa, uye izvo zvinokanganisa manzwiro ake, ayo anochinja kuita grey achipiwa chinhambwe neshamwari yake mugungwa.
Mamiriro ezvinhu anozivikanwa nemunyori ari kure, uye neicho kure kure ndangariro dzake uye nhanho yake yehudiki inova iyo yakarasika paradhiso. Mukupesana, iro guta rinoburitswa seye grey cage, umo kufinhwa uye chishuwo manzwiro anonzwisa tsitsi mumoyo weAlberti uyo anoshuvira izvo zvaakasiya kumashure uye anomanikidzwa kunzwa kushungurudzika kwerudzi rwehutapwa kuti inodya kubva mukati.
Munhetembo idzi dzekuda zvegungwa zvakajairika kucherechedza zvinhu zvegungwa sekutengeserana kana mazita ehunyanzvi uye mwenje nemifananidzo zvinoita basa rakakosha kwazvo. Gungwa, rinova chimwe chinhu cheguta, rinobatwa nenzira yakabatana nemamita akafuridzirwa nhetembo dzakakurumbira matinogona kuona zvakafanana, kudzokorora, kuzvidzora uye nemakumi ezviuru zvetsika nzira dzinoshandira kuratidza chishuwo munzira yakakodzera kwazvo kuenda chidzidzo.
Mufananidzo - Labyrinth yemuurayi
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Ongororo pfupi ye «Sailor pane ivhu»